Wasiir Maareeye oo magacaabay Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Ganacsiga
Xaalado Bini aadanimo oo ka taagan Deegaano ka tirsan Gobalka Mudug
August 7, 2018 | Filed under: CAYAARAHA | Posted by: Zakarie Abdi
Qodobka 1-aad: Wakiil Raiola ayaa ka shaqeenayo sidii Pogba Barcelona ku aadi lahaa iyo Dembele uu Arsenal ku lahaa balse waa in Man United ogolaato bixitaanka Pogba.
Qodobka 2-aad: Real Madrid ayaa diyaar u ah cayaaryahankeed Kovacic inay amaah ku siiso Chelsea si heshiiska goolhaye Courtios Madrid ku aadayo u fududaado.
Qodobka 3-aad: Yerry Mina shalay iyo maanta tababarka Barcelona masoo xaadirin xili kooxaha Everton, Lyon iyo Man United saxiixiisa ku tartamayaan.
Qodobka 4-aad: Marko Pjaca oo milkiyadiisa iska leedahay Juventus ayaa gaaray xerada tababarka Fiorentina si tijaabo caafimaad looga qaado asigoo Viola qaab amaah ah ugu biirayo.
Qodobka 5-aad: Chelsea ayaa caawo kala xaajoon doonto dhigeeda Lyon qaabkii looga iibin lahaa cayaaryahan Nabil Fekir.
Qodobka 6-aad: Goolhaye Joe Hart ayaa si rasmi ah naadiga Burnley ugu biiray wuxuuna soo idleeyay 12-sano oo uu kooxda Man City ka tirsanaa, inkastoo xiliyo kala duwan amaah lagu diraayay.
Qodobka 7-aad: Everton ayaa AC Milan iyo Chelsea kaga guuleesatay saxiixa kubad sameeyaha Brazilian-ka ah Bernard kaasi oo aqbalay inuu Everton 5-sano heshiis u saxiixo waana cayaaryahan xor ah oo qandaraaskiisii Shakhtar xagaagan soo idlaaday.
Qodobka 8-aad: Goolhayaha xulka Masar Essam El-Hadary ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu cayaaraha caalamiga isaga fariistay wuxuuna xulka Masar ka tirsanaa mudo 22-sano ah dhawaana wuxuu noqday cayaaryahanka ugu da’da weyn ee koob aduun kasoo muuqdo.
Qodobka 9-aad: Inter Milan ayaa cayaaryahan Keita Balde Serie A-da kusoo celineyso ayadoo amaah AS Monaco kaga qaadaneyso taa badalkeeda Inter waxay amaah kusiin doontaa Monaco cayaaryahan Antonio Candreva.
Qodobka 10-aad: Kooxda AC Milan ayaa shaaca ka qaaday in €34m dul taalo daafaceeda garabka bidix Ricardo Rodriguez oo ay bartilmaameed ka dhiganayaan Arsenal iyo PSG.
Qodobka 11-aad: Man United ayaa dhigeeda Spurs kala heshiisay qiimaha Toby Alderweireld oo 60-milyan oo pound balse heshiiskan laguma dhawaaqi doono ilaa Spurs badalkiisa ay suuqa ka heleyso.
Qodobka 12-aad: Arsenal ayaa ku kalsoon cayaaryahan Dembele inay amaah kaga soo qaadan karto Arsenal ayagoo marka hore bixinayaan £8.9million haddii uu anfacana toos u iibsan doonaan xagaaga dambe.
Qodobka 13-aad: Kooxda Chelsea waxay waqti ku bixineysaa afar goolhaye midkood sidii ay gacanta ugu soo dhigi laheyd Jan Oblak (Atletico Madrid), Jack Butland (Stoke City), Pepe Reina (AC Milan) iyo Sergio Rico (Sevilla).
Qodobka 14-aad: Luka Modric ayaa berito (Arbaco) ah kulan la qaadan doono madaxweyne Florentino Perez si uu u weydiisto in Inter Milan laga iibiyo 33-jirkan.
Qodobka 15-aad: Man United ayaa iska diiday dalab Andre Gomes, Yerry Mina iyo 50m euro ah oo dhanka Barcelona kaga yimid si ay Paul Pogba kaga iibiyaan.
Qodobka 16-aad: Kulamada saaxiibtinimo caawo iyo berito ee kooxaha Yurub diyaar garowga ugu jiraan xili cayaareedka cusub:
ICC Cup: Chelsea Vs Lyon (10:05 habeenimo xiliga Geeska Afrika)
ICC Cup: Real Madrid Vs Roma (3:00 habeenimo/saq dhexe xiliga Geeska Afrika)
Cayaar saaxiibtinimo: Dortmund Vs Napoli (8:00 fiidnimo xiliga Geeska Afrika)
Cayaar saaxiibtinimo: Liverpool Vs Torin (9:30 fiidnimo xiliga Geeska Afrika)